သင်အဘို့အညာဘက်အရပျ၌ပါပဲ HDMI WiFi Dongle.ယခုအချိန်တွင်သင်ရှာဖွေထားပြီးမည်သည့်အရာကိုမဆိုသင်တွေ့ရှိရန်သေချာသည် Earldom.ကျနော်တို့ကဒီမှာပေါ်မှာကြောင်းအာမခံပါသည် Earldom.
အဆိုပါထုတ်ကုန်ချေးဖို့ကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ပတ်0န်းကျင်ဒြပ်စင်များကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့် aluminum frames နှင့် Aluminum trims များကိုလက်ခံသည်။.
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်မားစေရန်ရည်ရွယ်သည် HDMI WiFi Dongle.ကျွန်ုပ်တို့၏ရေရှည်ဖောက်သည်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်များနှင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခွင့်များကိုပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်တက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါလိမ့်မည်။
Earldom ကားတစ်စီး charger ကိုအားကြီးသောသံလိုက် 15w ကားတစ်စီးကြိုးမဲ့ iPhone 12 charger ကို Qi သံလိုက်ကြိုးမဲ့အားသွင်းတဲ့ကားကိုင်ဆောင်သူ
Earldom မိတ်ဆက်ခြင်းကို iPhone 12 Earldom ဘို့ကားတစ်စီး charger ကိုအားကြီးသောသံလိုက် 15w ကားတစ်စီးကြိုးမဲ့မှ charger ကို Qi သံလိုက်ကြိုးမဲ့အားသွင်းတဲ့ကားကိုင်ဆောင်သူ, အဆိုပါထုတ်ကုန်အကွာအဝေးကြွယ်ဝသောကွဲပြားခြားနားသည်။Qi, ကြိုးမဲ့အားသွင်း, သံလိုက်, မော်တော်ကား Holderကားထဲတွင်အသုံးပြုခဲ့လေထုပိတ်ဆို့နှင့်အတူကြိုးမဲ့ကားတစ်စီးအားသွင်း,